Vstali na Austria Euro 2021 Amụma & Ntụle Atụmatụ Ntụle oghere - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 22, 2021No Comments
Italy na Austria bụ egwuregwu nke abụọ na ọkwa knockout na Euro 2020. Egwuregwu that a ga-eme na June 26 na 2100 elekere Central Eastern European Summer Time na Wembley Stadium na London.
Formdị,tali, Usoro akara na usoro
Tupu ha amalite mkpọsa Euro 2020 ha Italytali nwere egwuregwu ọ bụla ha gbara kemgbe November 2020. Ha gbara egwuregwu 8 adorable nye ha goolu 0, ee d e! Ma nke ahụ abụghị ihe niile, Italytali enwebeghị mmeri kemgbe October 2018. Nke ahụ pụtara na ha enweghị mmeri na egwuregwu 27 na-aga n’ihu tupu egwuregwu mmalite ha na Euro 2020.
Ha garan’ihu na ndekọ that a dị ịtụnanya na-emeri otu egwuregwu ọ bụla na Euro 2020 na-enweghị otu ihe mgbaru ọsọ. Ha bụ naanị otu ndị Euro na oge a ka ha nye goolu 0.
Ọtụtụ ndị Fọọl Fọọl na-akatọ fortali maka ịgba bọọlụ na-agbachitere mana ọ dịkwa mma na mbuso agha, ọkachasịn’oge Euro.
Hastali agbaala goolu asaan’oge agba otu na Euro 2020, Naanị Netherlands nyere goolu karịa (goolu asatọ).
Alsotali nwekwara ọnụ ọgụgụ nke abụọ kachasị elu nke mbọ iji nweta ihe mgbaru ọsọn’oge ọkwa otu. Createdtali kere nnwapụta goolu iri isii, Denmark mepụtara naanị otu na 61 na otu nke atọ iji mepụta ohere kachasị mepụta ohere dị 13 karịa Italytali.
Alsotali dekwara aha nke abụọ kachasị elu nke gbaa ọsọ na otu egwuregwu.
Yabụ kedu ihen’azụ Italy t ịwakpo akụnụba t ụdị ịtụnanya?
Roberto Mancini na usoro ya. Anyị atụlewo ụzọ aghụghọ Italytali na amụma egwuregwu egwuregwu gara aga na anyị ga-achịkọta unn’okpuru:
Usuallytali na-amalitekarị na usoro 4-3-3 ttali na-eji bọlbụ na-agba bọlbụ Itali na-arụ website t azụ ma nwee ikike ịgbanwe ngwa ngwa na ọgụ.
Ma olee otu ha si eme ya?
Olee otu becametali si bụrụ otu egwuregwu
Soccer bụ otu egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, ndị otu egwuregwu kpakpando na-ada na asọmpi mba ụwa n’ihi na ha enweghị ike ibikọ ọnụ dị ka otu. Otú ọ dị, Italytali na-ezere nsogbu a ma dịka eziokwu, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụsi ọrụ ike dịka otu.
Ndị na-egwu egwuregwu ahụ gbanwere gburugburu ma na-agbasi ike n’ọhịa. Nke a dị iche na ọtụtụ otu ebe a t – ahụ mmiri a t – agan’ihu ma ọ bụ ikekwen’etiti etiti.
Ọ bụrụ na gaintali nweta ihe sitere na ọkara nke ha na-amalite website t goalkicks, Donnaruma setịpụrụ egwuregwu ahụ nye ndị na-agbachitere ya. Donnaruma bụ otun’ime ndị kacha mma inye goolu d e ọ dịkwa mma na bọọlụ.
A na-ahụkwa ike ịkụ bọl that an’azụ ndị agadi ha, Chiellini (onye bụkwa onyeisi) na Bonucci. Ndị a agbaala egwuregwu n’egwuregwu mba ụwa maka fortali ruo ọtụtụ afọ ma bụrụ 36 na 34 afọ n’otu n’otu.
Ọ bụ ezie na Chiellini t Bonucci nwere ike ọ gaghị enwe ijeụkwụ ha d e mbụ, ọgụgụ isi ha, mmata ha d e ọnọdụ ha na-enyere ha aka igbochi mwakpo na ọ bụghị naanị ha.
Dị ka ị pụrụ ịhụ d e foto dịn’elu, aka nri azụ (onye na-abụkarị Florenzi) na-egwuri egwu ma na-adaban’aka nri ha na Jorginho bụ otun’ime ndị na-eche nche nke ọma na-echebe ha ma ha mebere otu nwoke 4 na-agbachitere otun’ụdị nke dayamọnd.
Daimọn a t – ebugharị bọl ahụn’etiti onwe ha ma dị ukwuu mgbe ọ na – agafe. Nke a na-enyere Italytali aka nke ukwuun’ihi na ọ bụrụ na ndị mmegide na-akara onye na-agbachitere onye na-eche nche ha nche, iji gbochie ya ịgan’ihu bọọlụ ahụ gaan’ihu, ndị egwuregwu atọ ndị ọzọ nọ t gemstone a nwere ike karịa ịfefe ya ogologo.
Aka ekpe zuru azụ, Spinnazzola bụ onye na-ebuso onwe un agha nke na-anọn’akụkụ aka ekpe ma na-eme njem na-egbu egbu na obe maka ndị otu ya na igbe.
Nke a na-enye aka ekpe aka ekpe, onye na-abụkarị Lorenzo Insigne ịkpụn’ime igbe ahụ ma sonyere ọgụ ahụ.
Berardi bu uzo di omimi nke di ka Spinnazzola mana o nwere ikike igbutu ya.
Ndị egwuregwu anọ that a na-etolite ọgụ na-agafe pitch. Mana hastali nwere ngwa nzuzo, Nicolò Barella dị afọ iri abụọ na anọ. N’ihi na liketali na-achọ ịwakpo n’aka ekpe ọ na-ahapụ ụlọ n’aka nri na Barrella na-eji ọsọ ya iji gbaba n’ime igbe ahụ n’oge ọgụ ma na-etolite ọgụ mmadụ 5.
Barrella bụ igbe zuru oke iji kpọọ ọkpọ ọkpọ d e ọ bụ ezie d e ọ na-anụ ọkụn’obi ịbanye d e ọgụ, ọ nwere ịdọ aka ná ntị ịlaghachi iji nyere aka na nchekwa.
Ọ bụrụ na ha tufuo bọl niile otu presses mgbe ịnọgide na-enwe ha udi ma ngwa ngwa Transition ọgụ.
Nke a bụ ihe kpatara Italytali ji dị ukwuun’ịwakpo ma ọ bụ d e anyị ga-asị, mwakpo ọgụ.
Ndị otu siri ike dịka Italytali bụ ndị dị mman’ịwakpo na-enwe nsogbu pụrụ iche website na otu ndị na-achọ ịlụ ọgụ megide onwe ha. Ndị otu that a na-adịkarị omimi na kọmpat na-agọnarị ndị otu dịka Italytali ohere iji mepụta ohere.
Mana aretali dị mman’igbu ndị otu a. Ha na-eme nke a websiten’iji ọkaibe nke mbara ha na-amatị ​​ala ahụ nke ọma. Mgbe ha only nke an’otu akụkụ, jiri aka ekpe sị na Immobile, ndị otu egwuregwu na-emegide ndị otu na-agan’akụkụ ahụ.
Nke a na-ahapụ oghere ndị Italytali dị ukwuu na-erigbu. Ugbu a, ọtụtụ otu nwere ike ịmegharị oghere ndị ahụ website Id ọdịiche a mana ha anaghị adị ngwa ngwa ịme mkpebi na-enweghị isi na mkpebi a na-eme ka ndị otu na-agbachitere ịlaghachi azụ na ndị na-awakpo ahụ gafere bọọlụn’akụkụ ma ọ bụ azụ.
Ma a zụrụ aretali nke ọma iji mebie oghere ndị a ma jiri ha mee ihe ngwa ngwan’ihi eziokwu ahụ bụ na nnukwu ihu ha bụ ndị na-agan’ihun’etiti ndị nwere ike ịme oge na-agba ọsọ ma nwee mmegharị dị ịtụnanya na-enweghị bọl.
Ptali akara aka
Resttali zuru ike ma gbanwee 8 nke ndị mbido han’agba egwuregwu ikpeazụ ha na Wales. Mgbe ha nwetachara ezumike ha nke ọma, anyị na-atụ anya na Italytali ga-alaghachi na nke kachasị amasị ha na 11.
Formdị Ọstrịa, Uzo edepụtara aha na Usoro
Mgbe oge dị mma na Njikọ Mba nke hụrụ ha ka a na-akwalite Njikọ A maka 2022-23 UEFA Nations League. Agbanyeghị ịbanye na Euro 2020 Austria anọghị n’ụdị dị ukwuu na 2021.
Ha gbara egwuregwu 5 tupu egwuregwu ha na North Macedonia na Euro 2020 na-emeri naanị egwuregwu 1 megide Faroe Island, otu ndị nọ ugbu a t 113th.
Austria mechara ndị na-agba ọsọ rue Netherlands na Group C nke Euro 2020 na isi 6.
Ihe ndekọ that a rụtụrụ aka na Austria mepụtara mwakpo 144 nke mere ha ndị otu anọ kachasị nwee ọgụ.
N’ihe banyere agbachitere, Austria meririn’ọtụtụ ọnụ ọgụ dị ugbu a t 26 na-aga nke ọma ma weghachite bọọlụ 152, nke only ka ndị otu nwee mgbake bọọlụ nke abụọ kachasị elu.
A na-ejikọkwa Austria na Denmark n’ọnọdụ nke abụọ maka ọtụtụ ndị na-aga nke ọma. Nke a na-enye anyị nkọwa nke ụzọ Austria na-enwe mmasị iji.
Austria na-ewekarị usoro 3-5-2 mgbe ha chere onye iro dị ike ka .tali ihu. Maka ndị na – ebido n’egwuregwu dị ka nke a, Austria nwere akara azụ dị n’etiti 3.
David Alaba nọn’etiti nchebe a t ọ bụ etiti azụ na-enwe mmasị ịkwanye ma bulie bọọlụ ahụn’ihu. Ulmer na Dragovic nọ n’akụkụ ya.
Midfield nwere two wingbacks, two ndị na-agbachitere etiti d e igbe 1 ka ọ bụrụ ndị na-eme egwuregwu. Aka ekpe ekpe bụ onye na-awakpo nku azụ nke na-enwe mmasị ịmepụta ohere d e oben’ime igbe ahụ, nku a bụ Sabitzer.
Nri nku azu na-abụkarị Lainer ma ọ na-ala azụ ma na-enyere ndị na-agbachitere ya aka. Ndị na-agba bọọlụ na-agbachitere na-abụkarị Xver Schlager na Ulmer ndị na-anwa inwe ọganihu bọọlụ ahụ gaan’ihu ma na-echebe ndị na-agbachitere ọkachasị website Id ohere nke Sabitzer na-ahapụ mgbe ọ na-awakpon’aka ekpe.
Igbe nke 1 maka ndị na-agba bọọlụ na-agba ọsọ na-anwa ibubatan’ime igbe ahụn’oge mwakpo ọgụ na egwu azụ mgbe ndị otu tufuru ihe onwunwe.
Ọstrịa hụrụ n’anya ịpị elu ma na-echekwa ụdị nchebe ọ bụla.
Na ịgbachitere otun’ime ndị na-agan’ihu na-ada azụ na Austria dị ka 5-4-1.
Austria nwere aha ọma maka ịgbanye agbachitere ngwa ngwa dịka Italy. Agbanyeghị na agbanyeghị mmeri egwuregwu 2, enwere ike ịhụ ọtụtụ adịghị ike na mmanụ nke Austria.
Maka ndị na-ebido ya, agbachitere ha yiri ka ejikọtaghị ọnụ. Enwere ike ịhụ nke a n’ihe mgbaru ọsọ ha nyere na egwuregwu mmeghe ha na North Macedonia. Emekwara ka agbachitere ahụ na mmeri ha t Netherlands t mmeri ha na Ukraine.
Nsogbu ọzọ Austria nwere bụ na ha na-emecha.
Austria mara amụma akara
Anyị na-atụ anya na Line Line nke Austria agaghị agbanwe agbanwe ma ewezuga iwebata onye agha ha bụ Arnautovic.
Vstali na Austria Euro 2021 Amụma
Ihe iyi egwu nke Austria si na Sabitzern’aka ekpe mana nke ahụ bụ kpọmkwem ebe Italytali na-achọ ịkwado nchebe ha na aka nri ha bụ Florenzi na-ahọrọ igwu egwu.
Austria ga-anwa ịpị Italytali ike ma Italy nwere akara azụ siri ike d e agbanyeghị na Chiellini na Bonucci anaghị adị ọsịsọ dịka ha siri dịbu na ha nwere mmata na ọnọdụ yana ezigbo enyemaka websiten’aka ndị otu ha.
Anyị echeghị na Austria ga-enwe ike ịchụpụ ụlọ azụ akụkọ abụọ a. Ihe iyi egwu Italytali ga-abụ obe Sabitzer sin’aka ekpe na Florenzi kwesịrị ịnọn’elu egwuregwu ya iji gbochie Sabitzer ịkụ obe na ebe ahụ.
Arnautovic dị egwu na ikuku ma ọ nwere ike idozi nsogbu ha website Id ịmecha. Agbanyeghị anyị na-atụ anya ka Italytali debe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọzọ.
Hastali egosila t oge t oge ọzọ na ha nwere grade ịkụtu ọbụna otu ndị kachasị agbachitere ma anyị na-atụ anyan’ihu 3 ha ga-eme nke ahụ kpọmkwem megide agbachitere ndị Austrian nke mehiere ọtụtụ ihe na Euro 2020.
Anyị na slotfreespin na-atụ anya ka totali mepụta ọtụtụ ohere ma merie 3-0.
Italy na Austria Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị that a maka egwuregwu italia na Austria t Euro 2021:
1.5tali 1.52tug 4.00 Australia 7.00
Blog t nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ndị na-ede akwụkwọ na-akwado intalin’egwuregwu an’etiti Italy na Austria na Euro 2020.
Bookmaker na-enye Italytali t Austria t Euro 2020
N’echiche anyị, b-nzọ bụ otun’ime ndị na – eme akwụkwọ egwuregwu kacha mma maka ịkụ nzọ na egwuregwu Euro 2020. Ha nwere onyinye cashback ugbu that a nke na-enye gị $ 1 azụ maka $ 5 ọ bụla ị only t nzọ t Euro 2020. .
Nwere ike pịa onyonyo ndị that a ka ị gaa na B-Bets ma kwuo onyinye a t ngalaba nkwalite ha.
Italy na Austria Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Dịka anyị kwuburu na ngalaba amụma amụma Italytr Austria na nke Austria, anyị na-ebu amụma Italytali iji merie 3-0. N’ihi nnukwu nsogbu maka wetali, anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị gụọ Italytalin’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru website Id ịkụ nzọ dị mfe.
A tụlere ihe kpatara nke an’isiokwu anyị d e sistemụ ịkụ nzọ bọọlụ d e ịgba bọl bọọlụ ebe anyị na-atụle atụmatụ ndị nwere ike inyere gị aka ịzụlite usoro ịkụ nzọ bọọlụ nke gị ma mee nza bọọlụ bara uru.
Iji bie ogologo akụkọ dị mkpirikpi, ị kwesịrị izere ịtụba egwuregwu ndị mmeri ga-emeri ma ọ bụrụ na nsogbu ndị otu gị na-erughị 2.0.
N’ikwu nke a dị ka nkwarụ nkwarụ, oke /n’okpuru ịkụ nzọ nhọrọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 an’etiti andtali na Austria kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụn’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị that a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị nwere maka gị t vstali t Austria egwuregwu t Euro 2020:
Italy iji merie, naanị otu egwuregwu ma ọ bụ enweghị otu akara (akpọkwa NG). Nsogbu 2.00 karịrị ihe mgbaru ọsọ 2.5 ka a gbatara. Nsogbu 2.24Karịa ihe mgbaru ọsọ 2.5 ka a gbatara. Naanị otu egwuregwu ma ọ bụ enweghị otu akara. Nsogbu 6.20 Italy iji merie, ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 2.5 ka a ga-enweta. Nsogbu 2.60 Italy iji merie 3-0. Nsogbu 9.80 Handicap italy 0, Austria 1, 2 Italy iji merie. Nsogbu 2.44Handicap Italy 0, Austria two, Italy iji merie. Nsogbu 4.90Handicap Italy 0, Austria 3, Bring. Nsogbu 6.80Imobile iji merie Italy iji merie. Nsogbu 2.75Berardi iji akara, Italy iji merie. Nsogbu 3.45Imbile iji merie Italy meriri 3-0. Nsogbu 16.00